Nolosha Degmada Ceelbuur oo soo hagaageysa – Radio Muqdisho
Nolosha Degmada Ceelbuur oo soo hagaageysa
Degmada Ceel Buur ee gobolka Galguduud, waxaa ka muuqda horumar dhinaca nolosha ah, dadkii ka barakacay ayaa bilaabay inay dib ugu soo laabtaan ayadoo goobaha ganacsi dib loo furay inta badan.
Tallaabadan ayaa ka dambeysay markii dib loo kiciyay ceel-Biyoodkii magaalada oo ay maleeshiyaadka Al-Shabaab horay matoorkii uga qaateen, isla markaana ay dowladdu iyo hay’adaha samafalkuba gargaar gaarsiiyeen dadka degaanka.
Ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM ayaa bishii March la wareegay degmada Ceelbuur kaddib sanado badan oo ay saldhig u ahayd maleeshiyaadka Al-Shabaab. Kooxdan ayaa bililiqeystay degmada, ayadoo dadkii degaanku ay ka baxeen magaalada.
Guddomiyaha degmada Ceelbuur Nuur Xasan Guutaale ayaa sheegay in suuqa xoolaha lagu iibiyo ee degmada uu dib u shaqo bilaabay, sidoo kale dad badan ayaa ku soo laabtay xaafadahooda sida uu tilmaamay guddoomiyuhu.
Dadka ku nool Ceelbuur ayaa aha kuwo ku tiirsan wax soo saarka iyo xoolaha nool hase yeeshee bilihii la soo dhaafay waxaa cuuryaamiyay degmada maleeshiyaadka Al-Shabaab oo dadka ku hayay cagajugleyn.